Semalt: Olee otú Iji Wepụ Ntuziaka Spam? Mfe Atụmatụ
Nzuzo ntụgharị uche Spam aghọwo ihe na-ezute kwa ụbọchị maka ọtụtụ ndị ọrụ internet. Ịkwụsị ụdị ụdị okporo ụzọ a dị mkpa maka onye nwe ụlọ ọ bụla ma ọ bụ onyeọrụ SEO. Ngwá ọrụ Google Analytics nwere ọtụtụ ụzọ isi wepụ spam na-edekọ aha gị site na akụkọ ndị na-akpọ gị GA. Ụgbọ njem Spam bụ echiche ochie nke oji search engine usoro - commercial truck book value free. Ndị mmadụ n'otu n'otu ga-eji usoro a ịgha ụgha na ndị ahịa ha na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị ngwa. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịkpata echiche ụgha ụgha, na-eme ka nnukwu ọnyà na ndị ahịa ha na-enweghị atụ. Ịghọta ntinye akwụkwọ ntinye aka dị oké mkpa maka onye ọ bụla na-eme e-azụmahịa.
Nik Chaykovskiy, Onye Ọrụ Ndị Na - ahụ Maka Ihe Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ Semalt , kọwakwuru ebe a maka ụfọdụ okwu bara uru na nke a.
Ịghọta okporo ụzọ ntụgharị aka
Onye na-ezo aka n'ụgbọ okporo ụzọ bụ ndị nleta na-ejikọ njikọ na saịtị gị site na weebụsaịtị ndị ọzọ. Mgbe weebụsaịtị na-ejikọta na saịtị gị, enwere njikọ ntanetị kpọmkwem, nke nwere ike ime ka ndị ọbịa bịa. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịpị njikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị site na ngalaba dịka National Geographic's Website. Akwukwo ozi gi ga-abia na Nat Geo maka na i ghiri onye na-abia Nat Geo.
Gịnị bụ spam na-ezigara
Ntugharị spam bụ okporo ụzọ nke na-abịa site na mpaghara nke nwere ike ma ọ bụ na-ejikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ahụ nwere ike ịgụnye ezigbo nleta ziri ezi site n'aka ndị mmadụ n'ezie. N'ọnọdụ ndị ọzọ, onye na-edekọ spam na-anwa ịghọgbu gị GA koodu ntinye ederede na ndekọ nke nleta nke bụ nke ụgha..N'ọnọdụ abụọ ahụ, akwụkwọ nleta gị bara uru bụ nke nwere ike ma ọ bụ na ọ ga-abụrịrị ịtụgharị dịka akụkụ nke ndị ọbịa gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, spam nwere ike ime dị ka ndị na-agwa ndị mmụọ ma ọ bụ ndị na-akpọ nsị:
Ndị na-akpọ Crawler: Ha bụ tumadi bots. Okporo ụzọ nke sitere na bọtịnụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị legit. Ha na-abata na ebe nrụọrụ weebụ gị n'oge ezumike ziri ezi.
Ntuziaka mmụọ: Ndị a anaghị aga na ebe nrụọrụ weebụ gị. Otú ọ dị, ha na-ejikwa ịghọgbu Google Analytics gị n'ịdenye nleta na-adịghị.
Iwepụ spam na-edekọ ihe
Onye ọ bụla webmaster chọrọ ngwá ọrụ dị mkpa iji zoo okporo ụzọ nke na-esiteghị n'aka ezigbo ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ngwaọrụ ndị webmasters ji arụ ọrụ nkwado azụ nwere ike inyere ndị mmadụ aka iwepu spam na-ezigara ya. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịmegharị ụfọdụ n'ime ndị a na taabụ ntọala ha.
Na ntinye taabụ, ịnwere ike ịrụ ọrụ ọrụ ntanetị. E nwere spam data yana spiders nke na-achọ ịwa ebe nrụọrụ weebụ maka ihe dịgasị iche iche. Ịmepụta ihe ntanetị bot na omenala nwere ike inyere aka igbochi ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a si enwetaghị ego. Ụfọdụ ngalaba dị ka Semalt nwere akụkọ a ma ama banyere ịchụso ọgụ spam.
Ọ dị mkpa iji onye na-eweta email nke bụ ndị na-enye email nwere ike ịmepụta ụfọdụ ozi ntugharị site na weebụsaịtị. Ha nwere ike ime ka nlekọta ihe nchọgharị ahụ niile dị mma yana ichedo ndị ahịa gị site na mwakpo spam nwere ike ime.
Spam na-ekwu okwu bụ nnukwu nsogbu na-eche ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ SEO ojii ahụ na-ejikarị usoro ntinye akwụkwọ ntinye aka mee ka ha nweta nsonaazụ ngwa ngwa ha. Okporo ụzọ a enweghị ihe ndabere maka itinye ya n'ọrụ. Ị nwere ike izute ụfọdụ ntaramahụhụ mgbe ị na-agbalị ịhazi site na iji okporo ụzọ spam. Ụkpụrụ nduzi a nwere ike inyere gị aka izere okporo ụzọ na-ezo aka.